alshabaab Archives - iftineducation.com
Daawo Muuqaal : Dhiigii uu shubay Sheekh Rooboow oo Sun iyo Xaaraan lagu tilmaamay !!
Aamina Muuse Wehliye oo ka mid ah Wariyaasha ugu caansan dalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay Dhiigii uu ku deeqay afhayeenkii hore ee ururka Al Shabaab Sheekh Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur . Aamina Muuse oo si aad ah uga carootay arinkaas ayaa waxa ay Sheekh Mukhtaar Rooboow ku tilmaamtay dilaa soo haligay Dhalnyaro badan oo is qarxiyay waliba martay…
(Daawo Sawirro) Itoobiya oo dayuurado sida gargaar Caafimaad ka soo dejisay garoonka Aadan Cadde
Dayuurad Militari oo ay leedahay dowladda Ethiopia ayaa maanta gargaar caafimaad ka soo dejisay Garoonka dayuuradaha Aaden Cadde ee magaalada Muqdisho. Shixnadan caafimaad ee ka timid xukuumadda Adis-ababa ayaa loogu talo galay caawinta dhibanayaasha Qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Wasiirka Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya Drs. Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kaga guddoontay deeqdan Safiirka Ethiopia u…
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ku dhawaaqay in dalka uu galayo Xaalad dagaal oon caadi aheyn , waxa uuna baaq u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in loo diyaar garoobayo dagaal ka dhan ah kooxda Al Shabaab, waxa uuna tilmaamay in dagaalkaasi uu yahay mid loogu aargudayo dadkii lagu laayay qaraxii Isgooska Zoobe.…
Madaxweyne Farmaajo “Farahooda ayaa Ka muuqda in weerarkaas Al-Shabaab Ka dambeeyaan,, (Warbixin)
aadan21 / October 19, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka dambeeyaan weerarkii ugu dhimashada badnaa ee soo mara taariikha Soomaaliya, ee 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho, kaddib markii baabuur xamuul ah uu isku qarxiyay Isgoyska Zoobe. Weerarkan Argagixiso ayaa waxaa ku dhintay illaa saddex boqol oo ruux oo shacab ahaa, halka tiro intaa ka badan ay ku dhinteen.…
Sawir: Abu Mansuur oo la arkay isagoo Isbitaalada Muqdisho dhiig u shubayo dadka dhaawaca ah
aadan21 / October 16, 2017
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ahaa afhayeenkii hore ee Al-Shabaab oo dhawan isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya ayaa maanta la arkay isagoo dhiig u shubayo dadka Musiibada kasoo gaartay qaraxii ka dhacay Zoobe. Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa isbitaalka Degfeer ee Magaalada Muqdisho ku shubay dhiig uu ugu talagalay in lagu badbaadiyo dadka Musiibada ku dhacday. Sheekh Mukhtaar…
Al-Shabaab oo kordhiyay cadaadiska ay ku hayaan Abuu Mansuur
aadan21 / July 21, 2017
Al-Shabaab ayaa la sheegay inay kordhiyeen cadaadiska iyo hanjabaada ay ku hayaan Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ciidamo fara badan ku heysta deegaan ka tirsan Gobolka Bakool. Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa xajeejiyay in Al-Shabaab ay dhowr jeer oo hore dhaq dhaqaaq ciidan ka sameeyeen agagaarka deegaan lagu magacaabo Abal oo uu ku sugan yahay Abuu Mansuur. Wararka ayaa…